Zimbabwe was formerly known as Southern Rhodesia (1898), Rhodesia (1965), and Zimbabwe Rhodesia (1979). The first recorded use of "Zimbabwe" as a term of national reference dates from 1960 as a coinage by the black nationalist Michael Mawema,  whose Zimbabwe National Party became the first to officially use the name in 1961.  The term "Rhodesia"—derived from the surname of Cecil Rhodes , the primary instigator of British colonisation of the territory during the late 19th century—was perceived by African nationalists as inappropriate because of its colonial origin and connotations. 
You are all invited to join the *Zimbabwe Diaspora Vote Coalition* at the Union Buildings in Pretoria on Saturday the 18th of November 2017.
The SW Radio Africa report, which has been reproduced on numerous sites, including Zimbabwe Scenario and All Free Africa & Fair Zimbabwe Elections, doesn’t provide a source for its amounts. Nevertheless, similar approximations, ranging from -million to -million, 2-million and even 3-million have been extensively published in recent years.
· Zimbabweans across South Africa were in a celebratory mood following the resignation on Tuesday of their long serving President Robert Mugabe.
We will be handing over a detailed petition to the Chairman of SADC , President Jacob Zuma ,in order for him to table the demands of Zimbabwean citizens … Еще resident in the diaspora, at the SADC meeting ,to be held this weekend in Botswana.